1954-1964 Evinrude 5.5 HP soavalin-dranomasina Tune-UP Project Lower Service Unit / Manolo Impeller Water Pump | Outboard Boat Motor Repair
1954-1964 Evinrude 5.5 HP soavalin-dranomasina Tune-UP Project Lower Service Unit / Manolo Impeller Water Pump
Hevitra tsara foana ny manolo ny impeller. Mba hahatongavana amin'ny impeller dia mila esorinao ny lohan'ny herinaratra, esory ny rohin'ny fifindrana ary esory ny singa ambany. Ny fanesorana ny lohan'ny herinaratra dia heverina ho maharary satria ny motera vaovao dia tsy mitaky an'io, saingy tsy dia mafy loatra ka aza matahotra. Ny impeller dia iray amin'ireo ampahany manakiana indrindra amin'ny motera satria tsy nahomby izy io, afaka mandoro ilay motera mora foana ianao, manafoana ny loha, na manana olana lehibe hafa. Azonao atao ny mamantatra raha nafana ny motera iray satria ho may ny loko eo amin'ny lohan'ny varingarina na ny seranan-tsambo. Rehefa mihazakazaka ianao dia tokony hahita rano be mikoriana avy amin'ny fantson'ny ambany. Raha tsy hitanao ny rano mivoaka avy ao amin'ilay ambaratonga ambany dia akatona ny motera ary soloina ny impeller alohan'ny hampandehanana azy indray. Tokony ho afaka hikasika ny lohan'ny varingarina sy ny crankcase amin'ny rantsan-tànanao koa ianao ary tsy ho may. Ny motera vaovao dia manana "telltale" izay hamela anao hijery azy io amin'ny "pee" amin'ny alàlan'ny lavaka ao anaty mandady ambany. Ireo motera efa zokinjokiny ireo dia tsy manana ny "telltale", ka tsy maintsy jerenao hatrany ambany ao ambadiky ny singa ambany ny mahita ny rano lany.
Impeller Fizarana OMC Laharana 434424 NAPA / Sierra Fizarana Isa 18-3001
Esory ny visy fito izay mitazona ny lohan'ny herinaratra. Tokony hesorinao ihany koa ny rohy throttle izay mandeha eo anelanelan'ny sandrin'ny mpitrandraka sy ny fatrany mialoha. Mety mila mibontsina moramora ny crankcase lohan-doha ianao handrava ny tombo-kase. Atsangano ny lohan'ny herinaratra rehetra ary apetraho.
Elektrônika Throttle Linkage
Esory Power Head Screws
Asandrato Powerhead Breaking Seal
Rehefa mijery ambany ny toerana ipetrahan'ny powerhead ianao dia afaka mahita ny voanjo mitazona ny fifamatorana. Misy voanjo roa voasaraky ny mpanasa lamba. Esory ireo voanjo ireo ary esory ny rohin'ny fifindrana. Mety tsy maintsy afindrao ilay shifter mankany amin'ny toerany mandroso mba hisarahan'ny rohy. Raha mbola eto ianao dia esory ny satrok'ilay lohataona sy lohataona eo an-tampon'ny zana-kapoaka. Mitandrema satria toy ny mitsambikina sy very ireto faritra ireto.
Esory fiovan'ny Linkage voanjo
Linkage voanjo nesorina
Tamin'ny fotoana sasany, dia te-hanova ny ambany vondrona menaka. Mandehana mialoha ka izao no ataovy no aza adino ny manao izany tatỳ aoriana. Esory ny ambony sy ambany, ary tatatra screws tatatra ny menaka taloha. Ny zavatra izay nivoaka avy nijery ahy bebe kokoa tahaka ny menaka nampiasaina maotera. Mandehana mialoha ary manolo ny menaka amin'ny tarika ambany tsara outboard ambany tarika lube fitaovana. Don ny mampiasa ny hydraulic tsiranoka araka ny voasoratra eo amin'ny lafiny ambany tarika. Ny spec ho an'ny tarika ambany ity dia fitaovana lube Ambany tarika menaka: 80 / 90W / OMC / BRP HiVis ary mety ho hita na aiza na aiza fotsiny.
Ambony tatatra Sokiro
Ampiasao ny wrench 7/16, esory ny bolt unit efatra ambany. Sintomy nidina ilay faritra ambany ary nidina. Ny vatan'ny fiara sy ny fifamatorana dia ho avy miaraka amin'ny singa ambany. Mampiasà lamba famaohana tsara na lamba firakotra hafa ary afehezo ao anaty vise ilay lamba ambany.
Esory Lowr horonan Unit
Esory ny pin roll eo an-tampon'ny drivehaft. Hilainao an-tsokosoko izany mba hahafahanao manala ny trano fonenana. Aza esorina amin'ny sisiny ambany ny drivehaft satria mety ho sarotra ny mamerina azy. Miala tsiny amin'ny sary manjavozavo etsy ambany.
Esory Roll Pin
Esory ny visy efatra izay mihazona ny tranon'ny mpanentana. Atsangano ny vatan'ny mpampita. Ilay impeller taloha dia tokony ho ao anatin'io trano io. Raha ny amiko, ny impeller dia potika (tsy tsara). Esory ny mpanentana, diovy ary esory ny trano fonenana. Etsy ambany no ahafahanao mahita ny impeller taloha amin'ny ampahany ary ilay impeller vaovao.
Esory Impeller Cover
Bad sy New Impeller
Esory amin'ny bokotra drive ny lakilen'ny mpametaka. Mora very ity ampahany ity ary sarotra soloina mba hitandrina.
Esory Impeller Key
Esory sy diovy ny takelaka mitafy impeller. Tsofy ny rivotra voahidy ka tsy misy sombin-javatra mampidina ny impeller na ireo sombin-tany hafa mety ho tratra ao amin'ireo lalan-drano any amin'ny lohan-kery. Soloy ny takelaka anaovana.
Soloy Water Plate
Apetraho ao amin'ny trano fampidirana ilay impeller vaovao. Mety ho hafetsena ihany io. Mila mihodina ny mpanohitra amin'ny famantaranandro arakaraka ny famantaranandro ary manenjana ny kiheba, mba hipetrahany ao anaty trano. Soloy ny lakilen'ny mpametaka sy ny fonenana ary ataovy azo antoka miaraka amin'ireo visy efatra izay mitazona ny fonenana impeller. Zava-dehibe ny tsy manadino ny lakilen'ny impeller. Raha tsy misy izany dia tsy hikorontana sy hantsaka rano ny impeller. Amin'io fotoana io dia soloina ihany koa ny tsipika fanakodia eo an-tampon'ny vatan'ny fiara.
Toerana Impeller ho Housing
Soloy Impeller Key ary ny trano fonenana
Na dia manana ny singa ambany aza ianao, diovy sy atsofohy izay rehetra azonao atao, ao anatin'izany ny fantson-drano izay mitondra rano avy ao amin'ny trano fampidirana mankany amin'ny lohan-jiro. Mametraha silipo manify amin'ny silipo eo ambonin'ny vatan'ilay faritra ambany kokoa alohan'ny hamerenany azy any amin'ny sisin-tany. Mety tsy maintsy afindrao ny faritra ambany mba hahazoana ny drivehaft ary hifindrana ny rohy hamahanana miverina amin'ny alàlan'ny elanelam-potoana. Ampidino ny singa ambany miaraka amin'ireo bolt efatra sy ny wrench 7/16.
Miverina ho ambany dia Midsection
Mampiditra Lower Unit
Soloy ny hevi-dehibe, i Seara Pin, cotter Pin, ary ny hevi-dehibe satroka.
Soloy ny hevi-dehibe sy Seara Pin.
Soloy Cotter Pin sy hevi-dehibe Cap
Apetaho ny rohin'ny fifindrana. Diovy sy tsofohy araka izay tratranao ny faritra. Soloy ny lohataona, ny satrony ary ny mpanasa faladianao amin'ny vatan'ny fiara.
Mampiditra fiovan'ny Linkage voanjo
Esory ny takelaka miditra ao anaty rano ary zahao ao aoriany. Raha misy misy ao, diovy ary tsofohy. Avereno hiverina ilay takelaka misy tsofoka manatrika ny aoriana.
Raha tsy mandeha ny herinao, mihodina mivadika, jereo ny tombo-kase ambany fiara ary soloina raha ilaina. Diovy sy tsofohy ny rano rehetra. Azonao atao ny mametaka ny lohan'ny herinaratra hiverina amin'ny toerany ary manily ireo visy lohan-doha fito. Mariho, ny visy lohan'ny lohan'ny mandroso dia mety ho sarotra soloina. Ny fika nampiasako dia ny maka silika ary apetaho amin'ny lohan'ny visy. Apetaho amin'ny lozisialy ny lohan'ny visy ary avelao ho maina izy. Ankehitriny ny visy dia hijanona eo amin'ny boaty visy mba hahafahanao mahazo ilay visy mankamin'ny lavaka mandroso amin'ny lohan-doha.
Soloy Power Head
Mampiditra Throttle Linkage
Ary ny ambany tarika dia serviced, ary ny maotera ho mihazakazaka mangatsiaka amin'ny paompy rano impeller vaovao.